सेक्स टोयतर्फ मानिसको आकर्षण बढ्दो !
प्रकाशित २०७२ चैत १६ मंगलबार
एजेन्सी। समाज दिनानुदिन आधुनिकतातर्फ गैरहेको छ। नयाँनयाँ कुराको आविस्कार भएसंगै विज्ञानले पनि प्रगति गरिनै रहेको छ। हामीले रोबोटको बारेमा सुनेका र रोबोटले काम गरेको पनि देखेका छौं। यो त भयो पुरानो कुरा। तर अब सेक्सको लागि पनि रोबोट अर्थात् खेलौनाको प्रयोग प्रायशः सामान्य भैसक्यो। शारीरिक सुखका लागि पार्टनरको विकल्पको रुपमा निर्माण गरिएको सेक्स टोयहरुलाई उदारवादी देशका मानिसहरुले निकै नै प्रयोग गर्न थालिसकेका छन्।
मानिसलाई काल्पनिक सेक्स सुखको अनुभूति गराउने सेक्स टोयको बिक्रि बिश्वभरिमा लगभग १५ बिलियन डलर हुने रिपोर्ट सार्वजनिक भैसकेको अवस्थामा यसको बिजनेश प्रत्येक बर्ष ३० प्रतिशतले बढ्ने तथ्य पनि बाहिर आइसकेको छ। सेक्स टोयको सबै भन्दा ठुलो बजार अमेरिका रहेको कयौं अनुसन्धानले बताएका छन्। सेक्स टोय सबै भन्दा बढी अमेरिकामा खपत हुने गर्दछ। यहाँको ठुला कमर्सियल आउटलेटहरुमध्ये लगभग प्रत्येक ठुला कमर्सियल आउटलेटमा सेक्स टोय सजिलै पाइन्छ।
तर भारत र दक्षिण अफ्रिकामा भने यसको बिक्रीमा प्रतिबन्ध छ। भारतमा आइपीसीको धारा २९२ अनुसार सेक्स टोय बेच्नेलाई २ बर्षको जेल सजायं हुने कानुन छ ।त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकामा सेक्सुअल अफिनेन्स एक्ट ! १९५७ को धारा १८ ए का अनुसार अप्राकृतिक सेक्सलाई उत्साहित गर्ने कुनै पनि उत्पादन बेच्नलाई पूर्ण प्रतिबन्ध छ। सेक्स टोयको उत्पादनको कुरा गर्नुपर्दा जति पनि सेक्स टोय विश्व बजारमा सप्लाई हुन्छ त्यसको ७० प्रतिशत सेक्स टोय चीनमा बन्ने गर्दछ।
यद्यपी केहि देशहरुमा सेक्स टोयको बिक्रि र प्रयोग प्रतिबन्धित छ तर पनि विश्वभरी नै यसको लुकिछिपी कारोबार र प्रयोग भने भइ नै रहेको छ।
इलामका चार 'अ' को मुल्य भारतीयको हातमा
केपीसँग झुक्ने काम हुँदैन : माधव नेपाल
'ओली कम्युनिष्ट पार्टीका भगौडा'
गृहकार्य गर्न ट्रम्पलाई समय चाहिने